Home News kolanyo katirsan Ciidamada Amisom oo qarax lagu la eegtay Magaalada Muqdisho
Kolonyo ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa qarax miino waxaa lagula eegtay Isgooska Soos ee Magaalada Muqdisho.
Qaraxa kadib ayaa ciidamada AMISOM waxaa ay rideen rasaas aad u fara badan.
Ilaa iyo hada lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi.
Dad Goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in ay istaageen isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha.
Ciidamada AMISOM ayaa dhowr jeer waxaa lagu qarxiyay Isgooska Soos ee Magaalada Muqdisho.
Previous articleGudoomiye Mursal oo ku wajahan Magaalada Baydhabo
Next articleGobolka Galgaduud oo lagu arkayo Diyaarado Dagaal oo dul heehaabaya
Odawaa Yuusuf Raage Oo magaalada marka ka Wada Abaabul Dagaal Oo...